ဘီငှက် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဘီငှက် သည် ကြာဖက်နင်းငှက်အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။ ကြာဖက်နင်းငှက်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အရှေ့အာရှ တိုက် တစ်ခွင်တွင် တွေ့ရသည်။ အလျား ၁၂ လက်မမှ ၁၅ လက်မအထိ ရှိသည်။ ငှက်ငယ်၏ အမောက်နှင့် လည်ကုပ်တို့သည် ညို၍ အောက်ပိုင်းမှာ ဖြူသည်။
ကြာဖက်နင်းငှက်သည် ခြေတံရှည်၍ ခြေချောင်းများမှာ အလွန်ရှည်လျားသည်။ ခြေချောင်းများဖြင့် ကြာဖက်များပေါ် တွင် ပေါ့ပါးစွာလျှောက်၍ အစာရှာဖွေနိုင်သောကြောင့် ကြာဖက်နင်းငှက်ဟု ခေါ်တွင်သည်။ ပျံသန်းရာတွင် ချည့်နဲ့၍ ပင်ပန်းပုံရသည်။ ပျံစ၌ ခြေထောက်များကို အောက်သို့ တွဲလျားချထားတတ်သည်။ အပြေးအလွန်သန်သည်။ ငှက်မသည် ငှက်ဖိုထက် ကိုယ်ထည်ကြီးသည်။
ကြာဖက်နင်းငှက်၏ အစာမှာ ပိုးမွှား၊ ခရု၊ ငါးနှင့် ရေတွင်ပေါက်သော အပင်များ ဖြစ်သည်။ မိုးရာသီတွင် ငှက်ကလေးများ ပေါက်သည်။ သစ်ရွက် ပေါင်းပင်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောအသိုက်သည် ရေပေါ်တွင် မျောနေတတ်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ဥ ၄ လုံးရှိတတ်၏။ ဥများမှာ အဝါရောင်အောက်ခံတွင် အမဲစင်းများ ပါရှိ၍ ချောမွှတ်ပြောင်လက်နေသည်။ ဥ၏အရွယ်မှာ ပျမ်းမျှအလျား ၁ လက်မခွဲ၊ ပြက် တစ်လက်မသာသာ ရှိသည်။
Bronze-winged Jacana (Metopidius indicus) onaSanta Cruz Water Lily ''Victoria cruzinia'' in Kolkata W IMG 3625.jpg
onaSanta Cruz Water Lily (Victoria cruzinia) in Kolkata, West Bengal, India.
↑ BirdLife International (2012). "Metopidius indicus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘီငှက်&oldid=711608" မှ ရယူရန်